Ururka Falanqeeya Xasaradaha Caalamiga Oo Sheegay In Khilaafka Khaliijka Uu Saameeyey Soomaaliya - Halbeeg News
Ururka falanqeeya xasaradaha caalamiga (International Crisis Group) ayaa sheegay in khilaafka khaliijka uu aad u saameeyay Soomaaliya, walibana si gaar ah dowladda federaalka ah.
Qoraal kasoo baxay ururkan ayaa lagu sheegay in siyaasiyiin dowladda ku jira ay la kala safteen dowladaha Sacuudiga iyo Qatar, taasi oo keentay in habacsanaan uu soo wajaho hannaanka shaqo ee dowladda.
Waxa uu ururkan sheegay in xubno ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay taageero u kala muujiyeen Labadan dhinac, bedalkii ay ka shaqeyn lahaayeen howlaha adag ee Soomaaliya horyaalla.
“Taageerada ay siyaasiyiintu kala muujiyeen waxay adkeyneysaa mowqifka dowladda, waxayna caqabad ku tahay dedaalka lagu gaari lahaa heshiis iyo horumar” ayaa warbixinta lagu yiri.
Rashiid Cabdi waa agaasimaha hay’adda ICG u qaabilsan Geeska Africa, waxa uu sheegay in dalalka Khaliijka ay doonayaan kaliya la wareegista koontaroolka Badda Cas iyo Gacanka Carbeed.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay Cabdi in Khilaafka Khaliijka uu saameeyey tababarada ciidanka qaranka Soomaaliya oo dalal dhowr ah ay wadeen.
Warbixintan oo aad u dheer ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in deganaansho la’aan ay xilligaan kusii faafeyso gobollada Soomaaliya, dowlad goboleedyada taageerada ka hela Imaaraadkana ay mucaaradayaan dowladda Soomaaliya.
Waxay warbixintan ka digtay in Soomaaliya usii dhego nuglaato khilaafka Khaliijka, sidoo kalena waxaa lagu sheegay in haddii dowladahan carabta ku dagaallamaan Soomaaliya ay imaan doonto halis kale oo xooggan.
Soomaaliya ayaa xiriir aan wanaagsaneyn wuxuu hadda kala dhaxeeya dowladda Imaaraadka oo ka mid ah isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga, inkastoo uu wanaagsan yahay xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar.